वर्कर सेन्टर सदस्य सर्वेक्षण Survey
वर्कर सेन्टर सदस्य सर्वेक्षण
नमस्ते! यस सर्वेक्षणले तपाईँलाई कामदारका रूपमा तपाईँका अनुभवहरू बारे प्रश्नहरू सोध्छ। यसलाई हामीलाई पृष्ठपोषण दिने हिसाबमा निर्माण गरिएको छ जसले गर्दा हामी तपाईँलाई प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरूमा सुधार गर्न सकौँ। हामी तपाईँका इमानदार प्रतिक्रियाहरूको सम्मान गर्छौँ। तपाईँका प्रतिक्रियाहरू गोपनीय राखिनेछन् र कम्युनिटी लेबर युनाइटेड र वर्कर सेन्टर, तथा यस परियोजनाका बाहिरी मूल्याङ्कनकर्तासँग मात्र साझा गरिनेछ भन्ने कुरा कृपया नोट गर्नुहोस्। यो सर्वेक्षण पूरा गर्नका लागि करिब १५ मिनटको समय लाग्नेछ। यदि तपाईँसँग यस सर्वेक्षणलाई लिएर कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया मिन्डी फ्राइडलाई mindy@fried.net मा इमेल गर्नुहोस्। यो सर्वेक्षण पूरा गरेर गर्नुभएको सहयोगलाई हामी सम्मान गर्छौँ।
इसाबेल गोन्जालेज र डार्लिन लोम्बोस
कम्युनिटी लेबर युनाइटेड
* 1. तपाईँ कस्तो किसिमको काम गर्नुहुन्छ?
स्वास्थ्य स्याहारको काम
कार धुने काम
* 2. तपाईँका कतिवटा तलबी रोजगार छन्?
* 3. विशिष्ट रूपले तपाईँ प्रतिहप्ता कति घण्टा काम गर्नुहुन्छ?
८१ वा बढी घण्टा
* 4. तपाईँ कति कमाउनुहुन्छ ? यदि तपाईँ एकभन्दा बढी रोजगारमा हुनुहुन्छ भने, कृपया प्रत्येक रोजगारमा कति कमाउनुहुन्छ लेख्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो प्रतिघण्टा ज्याला दर वा यदि तपाईँ दैनिक रूपमा तलब दिइन्छ भने, आफ्नो दैनिक तलब दर लेख्न सक्नुहुन्छ। टिएक्स!
घण्टा वा दिन
$1.00 - $5.00 $5.01 - $10.00 $10.01 - $15.00 $15.01 - $20.00 $20.01 - $25.00 $25.01 - $30.00 $30.01 - $50.00 $50.01 - $75.00 $75.01 - $100.00 $100.01 - $125.00 $125.01 - $150.00 $150.01 - $175.00 $175.01 - $200.00 $200.01 or more पहिलो रोजगार ज्याला menu Per hour Per day पहिलो रोजगार घण्टा वा दिन menu
$1.00 - $5.00 $5.01 - $10.00 $10.01 - $15.00 $15.01 - $20.00 $20.01 - $25.00 $25.01 - $30.00 $30.01 - $50.00 $50.01 - $75.00 $75.01 - $100.00 $100.01 - $125.00 $125.01 - $150.00 $150.01 - $175.00 $175.01 - $200.00 $200.01 or more दोस्रो रोजगार ज्याला menu Per hour Per day दोस्रो रोजगार घण्टा वा दिन menu
$1.00 - $5.00 $5.01 - $10.00 $10.01 - $15.00 $15.01 - $20.00 $20.01 - $25.00 $25.01 - $30.00 $30.01 - $50.00 $50.01 - $75.00 $75.01 - $100.00 $100.01 - $125.00 $125.01 - $150.00 $150.01 - $175.00 $175.01 - $200.00 $200.01 or more तेस्रो रोजगार ज्याला menu Per hour Per day तेस्रो रोजगार घण्टा वा दिन menu
$1.00 - $5.00 $5.01 - $10.00 $10.01 - $15.00 $15.01 - $20.00 $20.01 - $25.00 $25.01 - $30.00 $30.01 - $50.00 $50.01 - $75.00 $75.01 - $100.00 $100.01 - $125.00 $125.01 - $150.00 $150.01 - $175.00 $175.01 - $200.00 $200.01 or more चौथो रोजगार ज्याला menu Per hour Per day चौथो रोजगार घण्टा वा दिन menu
$1.00 - $5.00 $5.01 - $10.00 $10.01 - $15.00 $15.01 - $20.00 $20.01 - $25.00 $25.01 - $30.00 $30.01 - $50.00 $50.01 - $75.00 $75.01 - $100.00 $100.01 - $125.00 $125.01 - $150.00 $150.01 - $175.00 $175.01 - $200.00 $200.01 or more पाँचौँ रोजगार ज्याला menu Per hour Per day पाँचौँ रोजगार घण्टा वा दिन menu
* 5. तपाईँ कसका लागि काम गर्नुहुन्छ? कृपया लागू हुने सबैमा चिनो लगाउनुहोस्।
म सोझै रोजगारदाताका लागि काम गर्छु।
म त्यस्तो कम्पनीमा काम गर्छु जसले रोजगारदाताबाट उप-ठेका लिन्छ।.
म अस्थ्यारी एजेन्सीका लागि काम गर्छु।.
म एउटा परिवारका लागि काम गर्छु।.
म एक जना मित्रका लागि काम गर्छु।.
म तलबका लागि मद्दत दिन्छु।.
* 6. तपाईँलाई काममा कस्तो लाग्छ? प्रत्येक वक्तव्यका लागि कृपया पूर्ण असहमत, असहमत, न सहमत न असहमत, सहमत, पूर्ण सहमत मा चिनो लगाउनुहोस् वा तपाईँ "लागू हुँदैन" मा चिनो लगाउन सक्नुहुन्छ यदि सो कथन तपाईँमा लागू हुदैन भने।.
पूर्ण असहमत असहमत न सहमत न असहमत सहमत पूर्ण सहमत लागू हुँदैन
मेरो रोजगारदाताले मलाई राम्रो ज्याला दिन्छन् ।.
मेरो रोजगारदाताले मलाई राम्रो ज्याला दिन्छन् ।. पूर्ण असहमत
मेरो रोजगारदाताले मलाई राम्रो ज्याला दिन्छन् ।. असहमत
मेरो रोजगारदाताले मलाई राम्रो ज्याला दिन्छन् ।. न सहमत न असहमत
मेरो रोजगारदाताले मलाई राम्रो ज्याला दिन्छन् ।. सहमत
मेरो रोजगारदाताले मलाई राम्रो ज्याला दिन्छन् ।. पूर्ण सहमत
मेरो रोजगारदाताले मलाई राम्रो ज्याला दिन्छन् ।. लागू हुँदैन
म प्रत्येक दिन काममा दिउसो लन्च ब्रेक लिन पाउँछु।.
म प्रत्येक दिन काममा दिउसो लन्च ब्रेक लिन पाउँछु।. पूर्ण असहमत
म प्रत्येक दिन काममा दिउसो लन्च ब्रेक लिन पाउँछु।. असहमत
म प्रत्येक दिन काममा दिउसो लन्च ब्रेक लिन पाउँछु।. न सहमत न असहमत
म प्रत्येक दिन काममा दिउसो लन्च ब्रेक लिन पाउँछु।. सहमत
म प्रत्येक दिन काममा दिउसो लन्च ब्रेक लिन पाउँछु।. पूर्ण सहमत
म प्रत्येक दिन काममा दिउसो लन्च ब्रेक लिन पाउँछु।. लागू हुँदैन
प्रत्येक दिन काममा म मेरो लन्च ब्रेक देखि बाहेक पनि, अन्य ब्रेकहरू लिन पाउँछु।.
प्रत्येक दिन काममा म मेरो लन्च ब्रेक देखि बाहेक पनि, अन्य ब्रेकहरू लिन पाउँछु।. पूर्ण असहमत
प्रत्येक दिन काममा म मेरो लन्च ब्रेक देखि बाहेक पनि, अन्य ब्रेकहरू लिन पाउँछु।. असहमत
प्रत्येक दिन काममा म मेरो लन्च ब्रेक देखि बाहेक पनि, अन्य ब्रेकहरू लिन पाउँछु।. न सहमत न असहमत
प्रत्येक दिन काममा म मेरो लन्च ब्रेक देखि बाहेक पनि, अन्य ब्रेकहरू लिन पाउँछु।. सहमत
प्रत्येक दिन काममा म मेरो लन्च ब्रेक देखि बाहेक पनि, अन्य ब्रेकहरू लिन पाउँछु।. पूर्ण सहमत
प्रत्येक दिन काममा म मेरो लन्च ब्रेक देखि बाहेक पनि, अन्य ब्रेकहरू लिन पाउँछु।. लागू हुँदैन
मेरो रोजगारदाताले मलाई समय मै तलब दिन्छन्।.
मेरो रोजगारदाताले मलाई समय मै तलब दिन्छन्।. पूर्ण असहमत
मेरो रोजगारदाताले मलाई समय मै तलब दिन्छन्।. असहमत
मेरो रोजगारदाताले मलाई समय मै तलब दिन्छन्।. न सहमत न असहमत
मेरो रोजगारदाताले मलाई समय मै तलब दिन्छन्।. सहमत
मेरो रोजगारदाताले मलाई समय मै तलब दिन्छन्।. पूर्ण सहमत
मेरो रोजगारदाताले मलाई समय मै तलब दिन्छन्।. लागू हुँदैन
मेरा रोजगारदाताले उसले वा उनले मलाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्छन्।.
मेरा रोजगारदाताले उसले वा उनले मलाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्छन्।. पूर्ण असहमत
मेरा रोजगारदाताले उसले वा उनले मलाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्छन्।. असहमत
मेरा रोजगारदाताले उसले वा उनले मलाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्छन्।. न सहमत न असहमत
मेरा रोजगारदाताले उसले वा उनले मलाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्छन्।. सहमत
मेरा रोजगारदाताले उसले वा उनले मलाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्छन्।. पूर्ण सहमत
मेरा रोजगारदाताले उसले वा उनले मलाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्छन्।. लागू हुँदैन
मेरो रोजगारदाताले मलाई नगद भुक्तानी गर्दछन्।.
मेरो रोजगारदाताले मलाई नगद भुक्तानी गर्दछन्।. पूर्ण असहमत
मेरो रोजगारदाताले मलाई नगद भुक्तानी गर्दछन्।. असहमत
मेरो रोजगारदाताले मलाई नगद भुक्तानी गर्दछन्।. न सहमत न असहमत
मेरो रोजगारदाताले मलाई नगद भुक्तानी गर्दछन्।. सहमत
मेरो रोजगारदाताले मलाई नगद भुक्तानी गर्दछन्।. पूर्ण सहमत
मेरो रोजगारदाताले मलाई नगद भुक्तानी गर्दछन्।. लागू हुँदैन
मैले रोजगार सुरु गर्नुभन्दा अघि कर्मचारी दुरुपयोग अधिकारको छूटमा हस्ताक्षर गरेको छु।.
मैले रोजगार सुरु गर्नुभन्दा अघि कर्मचारी दुरुपयोग अधिकारको छूटमा हस्ताक्षर गरेको छु।. पूर्ण असहमत
मैले रोजगार सुरु गर्नुभन्दा अघि कर्मचारी दुरुपयोग अधिकारको छूटमा हस्ताक्षर गरेको छु।. असहमत
मैले रोजगार सुरु गर्नुभन्दा अघि कर्मचारी दुरुपयोग अधिकारको छूटमा हस्ताक्षर गरेको छु।. न सहमत न असहमत
मैले रोजगार सुरु गर्नुभन्दा अघि कर्मचारी दुरुपयोग अधिकारको छूटमा हस्ताक्षर गरेको छु।. सहमत
मैले रोजगार सुरु गर्नुभन्दा अघि कर्मचारी दुरुपयोग अधिकारको छूटमा हस्ताक्षर गरेको छु।. पूर्ण सहमत
मैले रोजगार सुरु गर्नुभन्दा अघि कर्मचारी दुरुपयोग अधिकारको छूटमा हस्ताक्षर गरेको छु।. लागू हुँदैन
मेरा सुपरिवेक्षक सहयोगी हुनुहुन्छ।.
मेरा सुपरिवेक्षक सहयोगी हुनुहुन्छ।. पूर्ण असहमत
मेरा सुपरिवेक्षक सहयोगी हुनुहुन्छ।. असहमत
मेरा सुपरिवेक्षक सहयोगी हुनुहुन्छ।. न सहमत न असहमत
मेरा सुपरिवेक्षक सहयोगी हुनुहुन्छ।. सहमत
मेरा सुपरिवेक्षक सहयोगी हुनुहुन्छ।. पूर्ण सहमत
मेरा सुपरिवेक्षक सहयोगी हुनुहुन्छ।. लागू हुँदैन
म मेरो जागिर खोसिएला भन्ने चिन्तामा छैन।.
म मेरो जागिर खोसिएला भन्ने चिन्तामा छैन।. पूर्ण असहमत
म मेरो जागिर खोसिएला भन्ने चिन्तामा छैन।. असहमत
म मेरो जागिर खोसिएला भन्ने चिन्तामा छैन।. न सहमत न असहमत
म मेरो जागिर खोसिएला भन्ने चिन्तामा छैन।. सहमत
म मेरो जागिर खोसिएला भन्ने चिन्तामा छैन।. पूर्ण सहमत
म मेरो जागिर खोसिएला भन्ने चिन्तामा छैन।. लागू हुँदैन
आकस्मिक स्थितिका लागि बचेको रकम सहित मेरो परिवारको आय बिलहरू तिर्नका लागि पर्याप्त छ।.
आकस्मिक स्थितिका लागि बचेको रकम सहित मेरो परिवारको आय बिलहरू तिर्नका लागि पर्याप्त छ।. पूर्ण असहमत
आकस्मिक स्थितिका लागि बचेको रकम सहित मेरो परिवारको आय बिलहरू तिर्नका लागि पर्याप्त छ।. असहमत
आकस्मिक स्थितिका लागि बचेको रकम सहित मेरो परिवारको आय बिलहरू तिर्नका लागि पर्याप्त छ।. न सहमत न असहमत
आकस्मिक स्थितिका लागि बचेको रकम सहित मेरो परिवारको आय बिलहरू तिर्नका लागि पर्याप्त छ।. सहमत
आकस्मिक स्थितिका लागि बचेको रकम सहित मेरो परिवारको आय बिलहरू तिर्नका लागि पर्याप्त छ।. पूर्ण सहमत
आकस्मिक स्थितिका लागि बचेको रकम सहित मेरो परिवारको आय बिलहरू तिर्नका लागि पर्याप्त छ।. लागू हुँदैन
* 7. के यी मध्ये कुनै कुराले तपाईँलाई काममा चिन्तित बनाउँछ ? (कृपया लागू हुने सबैमा चिनो लगाउनुहोस्।)
मेरो सहकर्मीले मलाई बुली गर्छन् (हेप्छन्)
मेरो रोजगारदाता ममाथि चिच्याउँछन्.
मलाई मैले केही गल्ती गर्छु र रोजगारदातासँग समस्यामा पर्छु भन्ने डर लागिरहन्छ।.
मेरो कार्यस्थलमा पुलिस आउँछ भन्ने कुरामा म चिन्तित रहन्छु।.
मेरो कार्यस्थलमा आप्रवाशन आउँछ भन्ने कुरामा म चिन्तित रहन्छु।.
काममा यी मध्ये कुनै पनि चिन्ताहरू मसँग छैनन्।.
* 8. के तपाईँको रोजगारदाताले तपाईँसँग आदरसाथ व्यवहार गर्छन्? (कृपया एउटामा चिनो लगाउनुहोस्।).
कृपया व्याख्या गर्नुहोस्.
* 9. काममा समस्या भयो भने तपाईँ कोसँग कुरा गर्नुहुन्छ? (कृपया लागू हुने सबैमा चिनो लगाउनुहोस्।).
दम्पति वा पार्टनर
परिवारका अन्य सदस्यहरू
वर्कर सेन्टरका मानिसहरू
* 10. काममा भएका समस्याहरूबारे तपाईँले आफ्नो सुपरिवेक्षकलाई भन्नुभयो भने, उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ ? (कृपया उपयुक्त उत्तरमा चिनो लगाउनुहोस्।).
मेरो सुपरिवेक्षक सहयोगी हुनुहुन्छ र काममा समस्या आइपर्दा मलाई सहयोग गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ।.
मैले कामका समस्याहरू सुनाउँदा मेरो सुपरिवेक्षक केही पनि गर्नुहुन्न।.
मैले कामका समस्याहरू सुनाउँदा मेरो सुपरिवेक्षकले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ।.
यो मेरा लागि सान्दर्भिक छैन किनभने काममा कुनै समस्या छैनन्।.
* 11. यदि तपाईँ काममा आइपरेका समस्या आफ्नो सुपरिवेक्षकलाई भन्नुहुन्न भने, किन भन्नुहुन्न?
मलाई त्यसले कुनै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउला जस्तो लाग्दैन.
मलाई कामबाट निकालिन सकिन्छ भनी म डराउँछु.
मलाई काममा घटुवा गरिन्छ भनी म डराउँछु.
मलाई अर्कै काम दिइन्छ भनी म डराउँछु.
* 12. के तपाईँ वर्कर सेन्टरको सदस्य हुनुहुन्छ? यदि यस प्रश्नमा तपाईँको उत्तर छैन हुन्छ भने, कृपया प्रश्न १३ र १४ छोड्नुहोस् र १५ का प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्।
* 13. यदि तपाईँले प्रश्न नं. १२ मा छु जबाफ दिनुभएको छ भने, तपाईँ सदस्य भएको कति समय भयो? (यदि तपाईँको उत्तर छैन भने, यसलाई छाडिदिनुहोस्।)
_७ महिना देखि एक वर्ष
१ देखि २ वर्ष बीच
२ देखि ४ वर्ष बीच
* 14. यदि प्रश्न नं. १२ मा तपाईँको उत्तर छु भने, तपाईँ किन बैठकहरूमा जानुहुन्छ ? कृपया लागू हुने सबैमा चिनो लगाउनुहोस्। (यदि तपाईँको उत्तर छैन भने, यसलाई छाडिदिनुहोस्।)
मलाई महत्त्वपूर्ण हुने मुद्दाहरूका बारेमा जान्न.
विभेदको विरोध कसरी गर्ने भन्ने जान्न.
श्रम अधिकारहरूबारे जान्न.
* 15. के तपाईँलाई ज्याला चोरी अभियान बारे थाहा छ ?
* 16. यदि तपाईँले प्रश्न नं. 15 मा छ जबाफ दिनुभएको छ भने : के तपाईँलाई आफ्नो रोजगारदाता ज्याला चोरीका लागि जिम्मेवार (दोषी) छ भन्ने लाग्छ?
N/A म सेवानिवृत्त छु
* 17. के तपाईँको वर्कर सेन्टरले ज्याला चोरी सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्दछ?
म निश्चित छैन
* 18. प्रश्न नं. 17 मा यदि तपाईँको उत्तर गर्छ भन्ने छ भने, त्यसको अर्थ वर्कर सेन्टरले ज्याला चोरी सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्छ भन्ने हुन्छ, तपाईँ संलग्न हुने तरिकाहरू केके छन् ? (कृपया लागू हुने सबैमा चिनो लगाउनुहोस्।).
मैले उनीहरूलो प्रायोजन गरेको एउटा ट्रेनिङ वा सत्रमा भाग लिएँ जहाँ उनीहरूले ज्याला चोरी के हो भनी व्याख्या गरे।.
ज्याला चोरीका विषयमा प्रशिक्षकहरूले मेरा प्रश्नहरूको उत्तर दिए।.
ज्याला चोरीका विषयमा मैले वर्कर सेन्टरका अन्य मानिसहरू (सदस्यहरू) सँग कुराकानी गरेँ।.
ज्याला चोरीसँग मेरो स्थिति बारे मैले वकिलसँग कुरा गरेँ।.
मैले ज्याला चोरी दावी फाइल गर्ने निर्णय गरेँ।.
मेरो वर्कर सेन्टरले मलाई ज्याला चोरी सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्दछ, तर म सो अभियानमा संलग्न छैन।.
मेरो वर्कर सेन्टरले ज्याला चोरी सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्दैन।.
* 19. ज्याला चोरी मुद्दा सम्बन्धी निम्नलिखित क्रियाकलापहरू मध्ये के तपाई कुनैमा सहभागी हुनुहुन्छ ? (कृपया लागू हुने सबैमा चिनो लगाउनुहोस्।).
ज्याला चोरी छलफल गर्नका लागि बैठकहरू.
ज्याला चोरी बिल (राज्य संसद) लाई समर्थन गर्न ऱ्यालीहरू वा जुलुसहरू.
ज्याला चोरी बिलमा स्टेट हाउस पत्रकार सम्मेलन.
ज्याला चोरी बिलमा स्टेट हाउस सार्वजानिक सुनुवाइ.
स्थानीय ज्याला चोरी अध्यादेशको समर्थन गर्न ऱ्यालीहरू वा जुलुसहरू.
ज्याला चोरी गर्ने कुनै विशिष्ट रोजगारदाता माथि प्रत्यक्ष कार्बाही
ज्याला चोरी मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै पनि क्रियाकलापहरूमा म भाग लिन्न।
* 20. यदि तपाईँसँग ज्याला चोरी सम्बन्धी समस्याहरू भए, के तपाईँ आफ्नो कथा अन्यसँग साझा गर्न सक्षम हुनुभयो ? (कृपया लागू हुने सबैमा चिनो लगाउनुहोस्।).
मसँग ज्याला चोरी सम्बन्धी कुनै समस्याहरू छैनन्।
* 21. तपाईँ ज्याला चोरी अभियान बारे के सोच्नुहुन्छ ?
ज्याला चोरी अभियानले कामदारहरूलाई असर पार्ने गरी महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्नेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु।.
ज्याला चोरी अभियानले कामदारहरूलाई असर पार्ने गरी महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्नेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु।. पूर्ण असहमत
ज्याला चोरी अभियानले कामदारहरूलाई असर पार्ने गरी महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्नेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु।. असहमत
ज्याला चोरी अभियानले कामदारहरूलाई असर पार्ने गरी महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्नेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु।. न सहमत न असहमत
ज्याला चोरी अभियानले कामदारहरूलाई असर पार्ने गरी महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्नेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु।. सहमत
ज्याला चोरी अभियानले कामदारहरूलाई असर पार्ने गरी महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्नेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु।. पूर्ण सहमत
ज्याला चोरी अभियानले कामदारहरूलाई असर पार्ने गरी महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्नेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु।. लागू हुँदैन
ज्याला चोरी अभियान राम्ररी सञ्चालन भैरहेको छ।.
ज्याला चोरी अभियान राम्ररी सञ्चालन भैरहेको छ।. पूर्ण असहमत
ज्याला चोरी अभियान राम्ररी सञ्चालन भैरहेको छ।. असहमत
ज्याला चोरी अभियान राम्ररी सञ्चालन भैरहेको छ।. न सहमत न असहमत
ज्याला चोरी अभियान राम्ररी सञ्चालन भैरहेको छ।. सहमत
ज्याला चोरी अभियान राम्ररी सञ्चालन भैरहेको छ।. पूर्ण सहमत
ज्याला चोरी अभियान राम्ररी सञ्चालन भैरहेको छ।. लागू हुँदैन
ज्यालो चोरी अभियानले मलाई अन्य कामदारहरूसँग बढी जोडिएको महसुस गराउँछ।.
ज्यालो चोरी अभियानले मलाई अन्य कामदारहरूसँग बढी जोडिएको महसुस गराउँछ।. पूर्ण असहमत
ज्यालो चोरी अभियानले मलाई अन्य कामदारहरूसँग बढी जोडिएको महसुस गराउँछ।. असहमत
ज्यालो चोरी अभियानले मलाई अन्य कामदारहरूसँग बढी जोडिएको महसुस गराउँछ।. न सहमत न असहमत
ज्यालो चोरी अभियानले मलाई अन्य कामदारहरूसँग बढी जोडिएको महसुस गराउँछ।. सहमत
ज्यालो चोरी अभियानले मलाई अन्य कामदारहरूसँग बढी जोडिएको महसुस गराउँछ।. पूर्ण सहमत
ज्यालो चोरी अभियानले मलाई अन्य कामदारहरूसँग बढी जोडिएको महसुस गराउँछ।. लागू हुँदैन
* 22. के तपाईँ अन्य कुनै कुरा साझा गर्न चाहनुहुन्छ जुन तपाईँले ज्याला चोरी अभियानमा कार्य गर्दा अनुभव गर्नुभएको होस्?
* 23. कुन लिङ्गद्वारा तपाईँ आफूलाई परिचित गराउनुहुन्छ। (कृपया धेरैजसो लागू हुने एक वा वा बढी छनोट गर्नुहोस्।).
तेस्रो लिङ्गी (ट्रान्सजेन्डर)
जेन्डरक्वियर वा ननबाइनरी
अनिश्चित वा जिज्ञासु
अन्य (कृपया उल्लेख गर्नुहोस्)
* 24. निम्नमध्ये कुन वर्गमा तपाईँ आफूलाई परिचित गराउनुहुन्छ ? (कृपया लागू हुने सबैमा चिनो लगाउनुहोस्।).
अमेरिकी इन्डियन वा मूल अलास्का वासी
अश्वेत वा अफ्रिकी अमेरिकी
ल्याटिनो, हिस्पानिक वा स्प्यानिस मूलका
मध्य पूर्वीय वा उत्तर अफ्रिकी
अन्य प्रशान्त टापूवासी
अन्य नश्लियता वा उत्पत्ति राष्ट्र (कृपया उल्लेख गर्नुहोस्)
* 25. तपाईं कुन कर्मचारी केन्द्र हुनुहुन्छ?
* 26. प्रश्न (वैकल्पिक): तपाईँको रोजगारदाता (वा रोजगारदाताहरू)को नाम के हो?
सर्वेक्षण पूरा गर्नुभएकामा धन्यवाद!